Bụrụ China ọkachamara oxygen generator kemịkalụ na Peru ahịa factory na-emepụta |HRF
Ọkachamara kemịkalụ oxygen generator na ahịa Peru
ikukuịdị ọcha: 93%±2%
PSA (Nrụgide Swing Adsorption) Teknụzụ mgbanwe na nkewa ikuku na-abụghị nke Cryogenic naikukuTeknụzụ ọgbọ na-eji ọkwa pụrụ iche nke ZMS (Zolite Molecular Sieve).
A na-agafe ikuku abịakọrọ site na modul Twin Tower PSA jikọtara ya na mgbanwe akpaka n'elu valves.Mgbe ị gafechara ikuku refrigerated nke nkụ, a na-akpọnwụ.Ikuku akpọkọtara akpọnwụ ga-abanyezi na akwa Zeolite molecular sieves (ZMS).Zeolite Molecular Sieves bụ ọkwa pụrụ iche nke adsorbent nke nwere akụrụngwa nke mma mgbasa ozi nke mkpụrụ ndụ nitrogen.N'otu oge, otu ụlọ elu na-anọgide n'okpuru usoro mmepụta nitrogen, ebe ụlọ elu nke ọzọ na-emegharịghachi nke a na-enweta site na ịda mbà n'obi nke ụlọ elu na nrụgide ikuku.Nke na-apụ apụikukuA na-eziga gas na ụgbọ mmiri ịwa ahụ ebe a ga-edobe nrụgide kacha nta site n'enyemaka nke Onye na-ahụ maka nrụgide azụ.
Ụlọ ọrụ nwere ike inye PSA VPS nitrogen osisi, PSA ikuku osisi, PSA elu PSA mgbanwe nrụgide adsorption ikuku osisi, PSA mgbanwe nrụgide adsorption elu-ọcha hydrogen osisi, ikuku decomposition hydrogen osisi hydrogen, hydrogen-nitrogen proportioning ngwá, gas ọcha akụrụngwa, gas mgbake akụrụngwa, ikuku ọcha.
Anyị nwere ike ịnye ihe ngwọta dị iche iche nke gas dị ka ndị ahịa chọrọ. Anyị nwekwara ike ịnye ihe ngwọta dị iche iche nke gas dị ka ihe ndị ahịa chọrọ, ma nye ndị ahịa nitrogen, ikuku na hydrogen mmepụta ngwá ọrụ na ihe ndị yiri ya. nke nitrogen, ikuku, hydrogen na ihe ndị metụtara ya, ọzụzụ teknụzụ na ndụmọdụ teknụzụ, wdg. Ụlọ ọrụ na-emepụta ngwá ọrụ a na-ejikarị eme ihe na-abụghị ferrous, ferrous metal, okpomọkụ ọgwụgwọ, chemical ụlọ ọrụ, mmanụ ụgbọala ụlọ ọrụ, plastic ụlọ ọrụ, roba ụlọ ọrụ, electronic ụlọ ọrụ. , biya na ihe ọṅụṅụ, nri nchekwa ọhụrụ, metallurgical ụlọ ọrụ, iko ụlọ ọrụ, coal ụlọ ọrụ, aerospace technology nkwado na ndị ọzọ industries.The akụrụngwa kwụsiri ike na a pụrụ ịdabere na.
Main: Highland ikuku igwe, Highland dispersion ikuku ọkọnọ igwe, PSA variable adsorption cyanide osisi, PSA mgbanwe mgbali adsorption ikuku osisi PSA VPS ikuku osisi, PSA VPS elu-ọcha hydrogen osisi, mgbagwoju decomposition osisi radon ngwaọrụ, hydrogen-nitrogen proportioning ngwaọrụ, ngwaọrụ na-asachapụ gas, ngwaọrụ mgbake gas, akụrụngwa ikuku dị ka proje na-asachapụ gas.
Nke gara aga: 25 afọ 3200mm SS spunmelt nonwoven ákwà eme igwe mmepụta akara
Osote: 99% ịdị ọcha ọkwa ahụike oxygen n'ichepụta